Iziphumo zezemali ze-Apple kwikota yesibini ka-2021: Epreli 28. | Ndisuka mac
Ukuza kuthi ga ngoku iApple ayikaweli kuthungelwano lweengxaki eziveliswe ngulo bhubhane. Kufuneka sikhumbule ukuba iteknoloji ibe ngumxhamli omkhulu nangona Amaxesha anzima alindile. Iiakhawunti zenkampani zingaphezulu kokucoceka kwaye iyaqhubeka nokuba yinkampani evelisa inzuzo enkulu. Inkqubo ye- ku-Epreli ozayo 28, inkampani iceba ukwabelana nehlabathi ngemeko yekota yesibini.
Njengakwezinye iindawo zokuhlala ngexesha lesifo secoronavirus, iApple ayizukubonelela ngesikhokelo esisesikweni kwisithuba sakho se-2021 QXNUMX, engqinelana nekota yokuqala ngokwekhalenda. Njengoko besesitshilo, okwangoku inkampani ayikhange ifumane ziphumo zibi bhubhane wehlabathi.
Iingcali zeWall Street zilindele ukuba iApple inike ingxelo ngayo Ingeniso emalunga neebhiliyoni ezisixhenxe zeedola Kwikota yesibini ka-2021. Abahlalutyi baqikelela ingeniso ngesabelo ngasinye esi- $ 0.98. Oku kuthetha ukuba sijamelene nokwehla okuncinci kwamaxesha onyaka, kodwa ukwehla okulindelwe yinkampani. Akukho nto inokukhathazeka ngayo. Kodwa kunjalo, yile xa kuthelekiswa nekota edlulileyo apho iApple yanika ingxelo yerekhodi ngengeniso ye-21% kwaye yayilixesha lokuqala ukuba iApple ifumane imali engaphezulu kwe-100 yezigidigidi zeedola, yonke into ibonakala incinci.
Ukuba sithelekisa amanqaku amabini ama-2020 kunye nama-2021, kubonakala ngathi ngamanani asezantsi. Kwi-2020, yayinengeniso ye- $ 58,3 yezigidigidi. Oko ibikukunyuka kwe-1% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo (2019). Ngobungqina obuninzi, iApple iya kucaca gca ezo ziphumo zinomda obanzi kule 2021.
La manani ngenxa yentengiso ye-iPhone 12 kodwa nakwifayile ye- Ukuthenga ngaphakathi nohlelo kunye neendleko zeapp. Idatha ibonisa ukuba inkcitho yeapps inyukile nge-40% ngonyaka-ngaphezulu konyaka kwikota yokuqala ye-2021, kwaye akukho zimpawu zokuba intsebenzo iyacotha.
Into efanayo ngumbono womhlalutyi wezezimali Samik Chatterjee ovela kuJP Morgan. Ukholelwa ukuba abatyali mali bazilungiselele iziphumo Umvuzo olungeleleneyo kwikota yokuqala ka-2021. Nangona kunjalo, kusekho ukubanakho ukuba inyuke. USamik ukholelwa ukuba ukuthunyelwa kwe-iPad kunye neMac kunye nokukhula okuqinileyo kweenkonzo kunokuhambisa iziphumo ezingcono kunokuba bezilindelwe kwikota. Ngaphandle kwento yokuba amanani e-iPhone abonakala ngathi ayancipha.
Ukujikela kumanani ngokungqongqo, u-JP Morgan uthi i-Apple izakuxela ingeniso ye I-78,2 yezigidigidi zeedola kunye nomvuzo ngesabelo ngasinye se- $ 0,99. Uqikelela ingeniso ye-iPhone ye- $ 42 yezigidigidi. Ingeniso ye-IPad ye-5.5 yezigidigidi. Ingeniso yeMac ye- $ 8.2 yezigidigidi. Ingeniso yokunxiba eyi- $ 7,4 yezigidigidi kunye nenkonzo yengeniso ye- $ 15,8 yezigidigidi.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, iApple ayisayi kukhupha isikhokelo esisemthethweni kwikota yesithathu ka-2021.
Ukuthengiswa kwe-iphone kuyehla kodwa iiapps kunye neenkonzo zeApple ziyanda
Zinjalo njengokuba ubona amanye amanani aphezulu kancinci kuqikelelo lweWall Street, kodwa ziyafana kakhulu. Kule nto bobabini abahlalutyi bayavuma kukuba ukuthengisa kwe-iPhone kunciphile kancinci, ngokwahlukileyo, umvuzo uphezulu xa sithetha ngawo Icandelo lenkonzo lenkampani kunye neVenkile ye App. Kucacile, nangona kudala kwaziwa, ukuba icandelo elinethemba elikhulu lokukhula licandelo leenkonzo. Oko kukuthi, Apple TV +, Fitness TV ... njl. Kufuneka icace gca ukuba ezi nkonzo zikwabandakanya ukubakho kokuthengwa kwezicelo ezibanceda bonwabe ngcono kwaye ngakumbi kwezi nkonzo. Kwaye ngokuchaseneyo.
Akumangalisi ke ngoko Inkampani inomdla okhethekileyo kwi-Apple TV + khula. Ukwenza oku, uyaqhubeka nombono wakhe wokunyusa iimveliso ezisemgangathweni ngothotho olutsha, iifilimu kwaye ngakumbi nezakhe Umxholo wokuqala apho kukho izinto ezininzi.
Ngomhla wama-28 ku-Epreli, siza kushiya amathandabuzo kwaye siza kubona ukuba amanani sele ekhankanyiwe ahambelana nalawo athethwe apha zezi ngcali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iziphumo zezemali ze-Apple kwikota yesibini ka-2021: Epreli 28.